Nzira Yokutenga Bitcoins - Iva Yako Yako Bitcoins Muna No Time
Zvinogona kutora nguva kuti iwe unzwisise zvizere pfungwa ye Chii chinonzi Bitcoin. Asi kuti uenderere mberi, unofanira kuziva zvakawanda kuti utange kuzvishandisa iwe pachako. Iye zvino, inguva yokuti iwe udzidze kutenga bitcoins. Heano matanho ekutenga bitcoins.
Iva nehomwe yako
Usati wawana kuti ungatenga sei bitcoins, unoda kutanga kuwana Bitcoin wallet for it. Chikwama ndiko kwaunochengetedza makoko ako emari. MuBitcoin network, inoshanda nenzira iyo bhangi yebhangi inoshanda, mutsauko ndewokuti pane nzira dzakawanda dzekuwana nayo. Kutanga iwe unogona kuwana purogiramu yepurogiyuta kuti iiswe panzvimbo yekombiyuta yako yakaoma. Nekudaro iwe unogona kushandisa paIndaneti, web-based wallet services. Uye pakupedzisira, bitcoins yako inogona kudzivirirwa kunze kwemashoko kuburikidza nemabasa evhavha kana mumataini akawanda-siginho zvinoda zvingani zvinyorwa kuitira kuchengetedza account. Iyi ndiyo nzira dzakasiyana dzekutora chikwereti, uye ndezvekuti iwe ndeupi akakodzera iwe.
Kana uchinge uine chikwama, danho rinotevera rako nderokudzidza kutenga bitcoins. Bitcoin kugoverana ndiyo nzira yakanakisisa yekuita izvozvo. Inoshanda nenzira imwe chete yekutengeserana kwekune dzimwe nyika. Misiyano bedzi ndeyokuti iwe uri kutarisa panzvimbo ne bitcoins.
Kana iwe uchida ku commerce mu bitcoins nguva dzose, unogona kusarudza kuwana kambani neBitcoin exchange. Zvisinei, zvingafanira kupa ruzivo rwomunhu oga kuti uve nechokwadi chekuchengetedza account yako yakachengeteka. Kusiyanasiyana kwemashumiro ehurumende zvakasiyana pane zvavanofanira kupa. Funga nezvekugara kwako nokuti zvimwe kugoverana kukuru kune mabasa akanaka kune mamwe magetsi.
Imwe nzvimbo yaunogona kutenga bitcoins iri pamusika. Vamwe vanhu vanoda kukumbira zvakananga kubasa kana zvinhu kubva kwauri uye kuripa neBitcoin. Kunyangwe hazviwanzoitika zvino, asi zvinenge zvichigoneka kune vamwe vachizvipira kupa bitcoins mukuchinjana kwemari sekutengeserana kwakarurama. A Marketplace apo Bitcoin vatengi nevatengesi vanoita mabasa avo.